एलोवेरा प्रयोग गरेर - हाम्रो शरीरको लागि सबै फाइदाहरू बेजिया
सुसाना Godoy | 21/07/2021 12:00 | सुन्दरता
के तपाईंलाई एलोवेरा कसरी प्रयोग गर्ने थाहा छ? हो, यो सत्य हो कि हामी सुन्दरतामा एक तारा बोटबिरुवाको सामना गरिरहेका छौं र यो कमको लागि पनि छैन। तर आज तपाईंले अझ धेरै प्रयोगहरू लेख्नु पर्छ जुन तपाईंले जान्नु आवश्यक पर्दछ। किनभने न केवल सुन्दरताले उनीहरूबाट फाइदा लिन सक्छ तर त्यहाँ अरू पनि छन् जुन तपाईंले जान्नु आवश्यक छ।
तसर्थ, जब हामी उल्लेख गर्दछौं कि हामी सब भन्दा खास बोटबिरुवाहरूसँग व्यवहार गर्दैछौं, यो पूर्ण रूपमा सत्य छ। किनभने असंख्य प्रयोगहरू छन्यद्यपि यो सत्य हो कि केहि अरूहरू भन्दा राम्ररी परिचित हुनेछन्। त्यसकारण हामीले यो हामीलाई प्रदान गर्ने सबै चीजहरूको मजा लिनु आवश्यक छ, जुन कुनै सानो कुरा होइन। के तपाइँ अब फेला पार्न चाहानुहुन्छ?
1 सौन्दर्यमा मुसब्बर वेरा
2 अपच विरुद्ध एलोवेरा कसरी प्रयोग गर्ने
3 मोचबाट सूजन कम गर्दछ
4 दन्त प्लाक कम गर्दछ
5 अलविदा थकित खुट्टा
6 बुढेसकालको लक्षणलाई पछाडि छोड्नुहोस्
सौन्दर्यमा मुसब्बर वेरा
सायद यो सौन्दर्यको संसार हो जहाँ हामी एलोभेराका लागि पहिले भन्दा बढी प्रयोगहरू फेला पार्दछौं। किनकि यसले प्राय: सबै कुरा गर्दछ तपाईको इच्छा र अधिक। तपाईं यसलाई विश्वास गर्नुहुन्न? ठिक छ, अब हामी तपाईंलाई यो जस्तै उत्पादनको सबै भन्दा सिफारिस गरिएको प्रयोगहरू बताउँछौं।
तपाईंको छालामा अधिकतम हाइड्रेसन: छालालाई चिल्लो र कडा नहुनु पर्छ, त्यसैले यस्तो उत्पादनले सबै हाइड्रेसन सम्भव तुल्याउँछ।
यसका लागी अनुहार सफा गर्नुहोस् यो पनि उत्तम छ किनकि सफाई गहिरो हुनेछ तर यसले छालालाई हाइड्रेट पनि गर्नेछ।
छालाको हाइड्रेसन महत्त्वपूर्ण छ तर कपालको पनि। त्यसकारण, हामी कपालमा यो जेलको थोरै प्रयोग गर्न बाजी दिन्छौं र यसलाई केही मिनेटको लागि आराम गर्न दिनुहोस् र त्यसपछि कस्तो नरम रहन्छ हेर्नुहोस्। तर यो पनि यो dandruff लड्ने छ कि।
यदि तपाइँसँग छ भने सुख्खा ओठ, तपाइँ यसको पल्पको एक सानो रगड्नु पर्छ र तपाइँले धेरै परिणामहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ।
तन्का मार्कहरू कम गर्न, तपाईंले छालामा लोचलाई पुनःस्थापना गर्न क्षेत्रलाई हल्का रूपमा मालिस गर्नु पर्छ।
अपच विरुद्ध एलोवेरा कसरी प्रयोग गर्ने
Al विरोधी भड़काउने र सफा गर्ने गुणहरू छन्अपच विरुद्ध पनि प्रयोग गर्न यो उत्तम हुन्छ। तपाईंले यसलाई सँधै मध्यममा लिनुपर्दछ, तर यदि तपाईं करीव grams०० ग्राम मुसब्बर वेरालाई, एक सानो ककडी, निम्बूको रस र एक चुटकी अजमोदको साथ मिक्स गर्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई पूर्ण मिश्रण हुन्छ तपाईंको पेटलाई धेरै हल्का महसुस गर्न।
मोचबाट सूजन कम गर्दछ
यो सत्य हो जब हामीसँग तनाव वा मोच छ, हामी हाम्रो डाक्टर संग परामर्श गर्न पर्छ। तर यसका अतिरिक्त तपाईले जान्नुपर्दछ कि एलोभरा पनि यस समस्यासँग लड्नको लागि आधारभूत तत्व मध्ये एक हो। किनभने यो भड़काऊ छ। त्यसोभए तपाईले मसाज गर्न वा सानो उत्पाद लागू गर्न र क्षेत्र लाई पट्टी गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिएको प्रभावलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि हो। के तपाईंले पहिले नै प्रयास गरिसक्नु भएको छ?
दन्त प्लाक कम गर्दछ
यदि तपाइँको मुखमा कुनै प्रकारको संक्रामक समस्या छ, त्यसो भए तपाईले योसँग लड्न एलो भेरा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। किनकी हामी फेरि संक्रमणको बारेमा कुरा गर्दैछौं र यो स्याहार गरीन्छ र थोरै एलोभेरा साथै पानीले ठीक गर्दछ। हामी सबै कुरा राम्रोसँग मिल्छौं र हामी यो संयोजनसँग कुल्नु पर्छ। तपाईले कसरी देख्नुहुनेछ, दन्त पट्टिका कम गर्ने बाहेक, तपाईं आफ्नो मुखमा हुनसक्ने संक्रमणलाई अलविदा पनि भन्नुहुनेछ। वास्तवमा, यो कुल्ला खराब सास विरूद्ध पनि राम्रो छ।
अलविदा थकित खुट्टा
को थकित खुट्टा तिनीहरू पनि हाम्रो स्टार घटक संग एक मालिश संग soothes महसुस गर्नेछन्। यो गर्नका लागि तपाईंले पहिले फ्रिजमा राख्नुपर्नेछ र त्यसपछि तपाईंले सम्पूर्ण पीडादायी क्षेत्र मालिश गर्नुहुनेछ। यसलाई एक कोमल तर ढिलो मालिश गर्ने प्रयास गर्नुहोस् ताकि यसले हामीलाई चाहिएको रूपमा परिक्रमण सक्रिय गर्दछ।
बुढेसकालको लक्षणलाई पछाडि छोड्नुहोस्
हामी छाला हेरचाहमा फर्कन्छौं तर यस अवसरलाई आवाश्यक हुन्छ। किनभने यस अवस्थामा, पहिलो रिink्कलले अरुलाई अझ गहिराइमा पुर्‍याउँछ समयको क्रमसँगै। तसर्थ, यस बुढ्यौलीलाई रोक्नको लागि हामी सधैं सतर्क हुनुपर्दछ। त्यसो भए, यस जेलको साथ मालिशले कोलेजेनको उत्पादनलाई सक्रिय गर्दछ र परिणाम सफा छाला हुनेछ। के तपाईंले यी कुनै चालहरू कोसिस गर्नुभयो?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सुन्दरता » कसरी एलोवेरा प्रयोग गर्ने
नयाँ प्रस्ताव महिला'सक्रेट बीचको लागि